Maxaa ka jira in Marwan Barguuti uu jabiyey cunto kasoomidii? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Israel Prison Service
Image caption Muuqaal la sheegay inuu muujinayo Barquuti oo xabsiga dhexdiisa wax ku cunayo
Muuqaalka hogaamiyaha u dhashay Falistiin Marwan Barguuti oo ku xiran Israa'iil oo warbaahinta dalkaasi ay baahisay isaga oo jabiyay cuno ka samoomid uu ku jiray, ayay beeniyeen masuulyiinta Falistintinityiinta waxa ayna ku sheegeen mid been abuur ah.
Xaaska Mr Barquuti oo lagu magacaabo Fadwa ayaa sheegtay in muuqaalka loogu talagalay in dadka lagu niyad jabiyo. Laanta adeegga xabsiyada Israa'iil ayaa shaacisay muuqaalkan sida la sheegay muujinayo in hoggaamiyaha maxaabiista reer Falastiin ee muddada saddexda todobaad ah cunno joojinta ku jiray oo xabsiga gudahiisa cunno ku cunayo.
Laanta xabsiyadu waxa ay sheegtay in Marwaan Bargoti, si qarsoodi ah muuqaalkaasi looga soo duubay isaga oo waxyaabo sidda buskudka ah oo kale ku dhex cunayo xabsigiisa 27-kii bishii April iyo shantii bishanMay, balse ma aysan sheegin halka uu cunnadaasi ka helay.
Xaaska Barqoti ayaa muuqaalkaasi ku tilmaantay mid been abuur ah oo looga golleeyahay in lagu niyad jebiyo maxaabiista kale ee cunnada ka soontay.
'Sanadkii 2016kii wuxuu ahaa kii ugu darnaa ee soo mara carruurta Suuriya'
In ka badan 890 maxbuus oo ku xiran xabsiyada Israa'iil ayaa waxa ay 17-kii bishii April ay billaabeen in ay cunnada ka soomaan, arrintaa oo ay uga ashtakoonayaan xaaladda ku haysata xabsiyada Israa'iil.
Maxaabiistani ayaa soo bandhigay waxyaabaha ay dalbanayaan oo ay ka mid yihiin daryeel caafimaad oo ka wanaagsan kan ay hadda haystaan, in loo ogolaado in qoysaskooda ay marar badan soo booqdaan iyo in la soo afjaro in xabsiyada la isaga hayo iyaga oo aan wax maxkamad ah la soo taageyn.
Image caption Muqaalkani waxa uu muujinayaa maxaabista oo joojisey cuntada oo ay saddex sanadood ka soomanaayeen
Madaxa Urur ay leeyihiin Falastiiyiniinta xabsiyada Israa'iil ku xiran Qadowra Fares ayaa muuqaalkaasi ku tilmaamay mid been abuur ah, waxa uuna ku adkeystay in Baragoti kaligii lagu hayo xabsiga Kishon isla markaana uusan heli karin cunno uu cuno.
Barguuti ayaa ahaa hoggaamiyihii hore ee dhaq-dhaqaaqa Fatax ee Daanta Galbeed iyo hoggaamiyaha garabka hubeysan ee Tanziim.
Dacwad lagu qaaday xilligii kacdoonkii labaad ee Falastiyiniinta ayaa Barguuti waxa uu noqday nin caan ah, waxaa uuna taageero weyn ka helay garabyada kala geddisan ee Falastiyiniinta.
Barguuti oo 57 sano jir ah ayaa lagu tilmaamay in uu noqon doono qofka mustaqbalka baddali doono hoggaamiyaha Falastiyiniinta Maxamuud Cabbaas.